IGuinea eVisa ekwi-Intanethi | I-Visa ye-Guinea | natvisa.com
Isicelo seGuinea Visa kwi-Intanethi
IGuinea yazise i-eVisa yokungena ngokukodwa ukuze kube lula ukuhamba kwabantu ukuya eGuinea. Inkonzo ivumela abantu ukuba bafumane i-visa yokuya eGuinea ngesicelo se-visa kwi-intanethi kwiintsuku ezimbalwa zokusebenza. Bayacelwa abantu ukuba bazalise iinkcukacha zabo ezisisiseko, ulwazi lwencwadana yokundwendwela, kunye neenkcukacha zokuhamba. Emva kokwenza intlawulo, baya kuhlaziywa malunga nenqanaba labo lokuvunywa nge-imeyile. Isebenzayo kubantu abafuna ukuhlala eGuinea kangangeentsuku ezingama-90 okanye ngaphantsi. Isicelo sakho se-Visa eGuinea sinokwamkelwa okanye saliwe yiGunya, kwaye akuyi kubuyiselwa.
Kufuneka ulungele i-eVisa
Abahambi abavela kwihlabathi liphela bangafaka isicelo seVisa abakhenkethi ukuba bangene eGuinea. Nangona kunjalo, kukho okungafaniyo kwamanye amazwe. Iindwendwe ezivela eBenin, Burkina Faso, Cape Verde, Cote d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Niger, Nigeria, Mali, Algeria, Senegal, Sierra Leone, Tanzania, Egypt, Morocco ne Togo zingatyelela iGuinea ngaphandle Ukufaka isicelo seVisa.
Iindwendwe kufuneka zibe nepasipoti efanelekileyo yokufaka isicelo se-eVisa eGuinea. Ipaspoti kufuneka isebenze Ubuncinci beenyanga ezi-6 okanye nangaphezulu. Nge-Guinea eVisa, abahambi banokufumana zombini, ukungena kunye kunye nokungena kwilizwe. Ngokusekwe kwi-visa eyenzelwe iindwendwe, banokuhlala eGuinea kangangeentsuku ezingama-90 okanye iminyaka emi-3 ukuya kwemi-5 emva kokufika kwabo.
Abahambi abatyelela eGuinea kufuneka bafumane Umkhuhlane otyheli ugonyo kwaye kufuneka luphathe isatifikethi esingqina okufanayo. Ukongeza koku, iindwendwe kufuneka kwakhona zibe nesatifikethi sonyango esibonakala zilungele ukuhamba. Oku kuyakuqinisekisa ukuba undwendwe lusempilweni kwaye luyakwazi ukuhamba ngaphakathi elizweni ngaphandle kwemeko zonyango.
Abatyeleli kufuneka babonelele ngekopi eskenweyo esichaza isicwangciso sokuhamba kwabo. Oku kufuneka kubandakanya ukufika kwabo okusebenzayo kunye namatikiti okubuyela. Oku kuyakunceda abasemagunyeni beli lizwe ukuba bagqibe ekubeni bahambe nini na ilizwe. Ikopi eskenweyo kufuneka icace gca ukuze iinkcukacha zibonakale lula kwabasemagunyeni.
Iinkcukacha zeGuinea Visa
Yintoni iVisa yaseGuinea?
Ikhaya lisiya kwiilwandle ezintle, amahlathi emvula angafumani ndawo, iingcambu zamanzi kunye neNtaba iNimba Strict Nature Reserve, eGuinea yindawo efanelekileyo yokufuna iimbaleki kunye nabathandi bendalo. Ukutyelela le ndawo intle, abahambi kufuneka, okokuqala, benze isicelo se-eVisa yelizwe. Yinkqubo ye-visa yee-elektroniki eyaziswa ngurhulumente wase-Guinea. Ngale nkqubo, abemi abavela kumazwe amaninzi, kunye nepasipoti efanelekileyo, banokufaka isicelo se-eVisa. Inkqubo ye-elektroniki yesicelo se-Visa isusa isidingo sokuba abantu batyelele I-Ambassia okanye ime emgceni we-visa. Iifom zesicelo kulula ukufumana kuzo kwi-intanethi kwaye kuthatha kuphela imizuzu embalwa ukuyigqiba yonke inkqubo.
Ungasifaka njani isicelo se-eVisa eGuinea?
Olunye uncedo olukhulu lwe-eVisa kukuba abafaki zicelo banokufaka isicelo kuyo nayiphi na indawo. Amanyathelo okufaka isicelo se-eVisa alula kakhulu. Inkqubo ibandakanya amanyathelo amathathu alula:
Gcwalisa ifomu lesicelo: Ukufumana ifom yesicelo linyathelo lokuqala lokufaka isicelo se-eVisa eGuinea. Khuphela le fomu kwiwebhusayithi karhulumente. Gcwalisa ulwazi ngokuchanekileyo, ukuze isicelo sakho singalahlwa.
Ungeniso lwamaxwebhu: Ifom yesicelo kufuneka ingeniswe kunye namaxwebhu askeniweyo. Ilizwe ngalinye lineemfuno ezahlukeneyo. Ke ngoko, fumana amaxwebhu afuna ukubonelelwa kwinkqubo yesicelo se-Guinea eVisa kwaye uwalayishe kunye nefom yesicelo.
Yenza intlawulo: Ukugqiba inkqubo yokwenza isicelo ngokuhlawula umrhumo wevisa. Ungasebenzisa naliphi na ikhadi lekhredithi okanye ledebhithi elifanelekileyo ukuhlawula imali. Nje ukuba kwenziwe intlawulo, isicelo siya kungeniswa kwaye kuya kuqalwa ukuqhubekeka. Naluphi na ulwazi olunxulumene ne-visa luya kuthunyelwa kwi-imeyile yakho ye-id.
Nje ukuba abakhenkethi bafike kwisikhululo seenqwelomoya saseConakry, eGuinea, kufuneka baqhubekeke bekhupha i-visa ekhuphayo. Abenzi-sicelo mabangenise irisithi yabo yobhaliso lwe-eVisa ukugqibezela ukubhaliswa kwabo kwi-biometric. Iminwe yomenzi-sicelo kunye neefoto ziya kufakwa kwikhompyuter enye kwaye ziqhubekiswe kwangoko. Emva kokuba amaxwebhu abo ehloliwe kwaye elungisiwe, kuya kukhutshwa i-eVisa kwaye iindwendwe ziya kuvunyelwa ukungena elizweni.
Amaxwebhu ekufuneka eFakiwe kunye neFom yesicelo se-eVisa
Abenzi-zicelo ngelixa begcwalisa ifom yabo ye-eVisa kufuneka baskene kwaye bafake amaxwebhu athile. Uxwebhu lokuqala olufunekayo ikopi evavanyiweyo yephepha langaphambili lepaspoti yomenzi-sicelo. Oku kuyakunceda abasemagunyeni ukuba bafumane ulwazi lomenzi-sicelo olunje ngegama, ubudala, ubuzwe, uhlobo lwencwadana yokundwendwela, njl.
Ukongeza koku, abafaki-zicelo kufuneka balayishe ifoto yencwadana yokundwendwela enemvelaphi emhlophe. Abasemagunyeni baya kudinga ubungqina beshedyuli yokuhamba kubahambi; ke ikopi yetikiti lokubuya eliqinisekisiweyo kufuneka ilayishwe kwakhona. Amanye amaxwebhu ekufuneka ukuba abafaki zicelo bawafake kunye nesicelo sabo sesatifikethi sokugonyelwa i-Yellow fever kunye namanye amaphepha, kuxhomekeke kuhlobo lwe-visa abayicelileyo.
Amaxwebhu azakuhanjiswa ngokufika kwindawo yokujonga isikhululo seenqwelomoya saseGuinea
Enye yezona mfuno zibalulekileyo zokufumana i-eVisa eya eGuinea yipasipoti esemthethweni. Xa usenza isicelo se-eVisa, ipaspoti kufuneka isebenze kangangesithuba seenyanga ezi-6. I-eVisa yaseGuinea ibonelela abahambi bobabini, abangatshatanga kunye namangeniso amaninzi. Le visa ivumela iindwendwe ukuba zihlale eGuinea ixesha eliphakathi kweentsuku ezingama-90 ukuya kwengama-3-5 emva kokufika (ngokuxhomekeke kuhlobo lwe-visa).
irisithi yobhaliso ye-eVISA
Ukufika kweli lizwe, abahambi bayacelwa ukuba baveze irisithi yabo yokuBhaliswa kwi-eVisa kwabasemagunyeni kwindawo yokukhupha i-visa. Ukusilela ukwenza njalo kungakhokelela ekungavunyelweni kwesicelo se-Visa.
Ukuba ukwilizwe langaphandle, kubaluleke kakhulu ukuba ube nemali eyaneleyo. Iindleko ezininzi kufuneka zithathelwe ingqalelo xa undwendwela ilizwe langaphandle, njengokutya, ukuhamba, indawo yokuhlala kunye nenani lezinye izinto. Ingxamiseko yezempilo enokubakho ayinakho ukugwetywa. Nokuba imeko iyintoni na, kufuneka ube unayo imali eyoneleyo yokuzixhasa. Ukuqinisekisa oku, ugunyaziwe wokungena kwelinye ilizwe ucela ukuba ubanike ingxelo-mali yakho yokugqibela yeenyanga ezintathu.
Iinkcukacha zeZicwangciso zokuHamba
Abahambi kuya kufuneka banikeze iinkcukacha zezicwangciso zabo zokuhamba kubasemagunyeni abafudukayo. Oku kubandakanya ukufika kwabo okuqinisekisiweyo kunye nokubuya kwamatikiti. Olu lwazi luya kubavumela babone ukuba ngubani umntu ongena kweli lizwe, ngowuphi umhla kunye nendlela abaceba ukuhamba ngayo.
Abantu abafaka isicelo seGuinea Visa yase-Guinean (eVisa) kufuneka babonelele ubungqina ngendawo yokuhlala yabo eGuinea. Abafaki-zicelo kufuneka babonise amaxwebhu afanelekileyo endawo yokuhlala abebehlala kuyo, nje ukuba babe kweli lizwe. Ezi ndawo zihlala kuzo zinokuba zihotele ezibhalisiweyo, iimoto, indlu yeendwendwe, iikati okanye nayiphi na enye indawo ethe bagqiba kwelokuba bahlale kuyo.
Imiyalelo ebalulekileyo yabahambi yokufaka isicelo seGuinea Visa ekwi-Intanethi
Urhulumente wase-Guinea ukhupha iintlobo ezahlukeneyo zevisa visa:
IVisa yabakhenkethi: Isebenzayo yokungena kunye nokuhlala iintsuku ezingama-90.
IVisa yexesha elide: Isebenzayo unyaka omnye.
IiVisa zokungena ezininzi: Isebenzayo ukusuka kwiminyaka emi-3 ukuya kweli-5.
ITrans Visa: Ivumelekile ukuya kuthi ga kwiintsuku ezintathu.
Abemi belizwe ngalinye kufuneka benze isicelo se-Visa ngaphambi kokutyelela iGuinea, nangona kunjalo, phantsi kwezivumelwano zamazwe amabini, amazwe athile akhululwe. La mazwe; IBenin, iBurkina Faso, iCape Verde, iCote d'Ivoire, iGambia, iGhana, iGuinea-Bissau, iLiberia, iNiger, iNigeria, iMali, iAlgeria, iSenegal, iSierra Leone, iTanzania, i-Egypt, iMorocco neTogo.
Bonke abahambi kufuneka babe nencwadana yokundwendwela eqhelekileyo yokufaka isicelo se-eVisa eya eGuinea. Kwimeko apho abanazo iipasipoti ezixhaphakileyo kufuneka benze isicelo. Nangona kunjalo, kwenziwe ukhetho kubemi bamazwe athile. Abemi bala mazwe alandelayo aneeplothi zokunxibelelana okanye zenkonzo abayidingi i-visa yokungena kweli lizwe, ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-90. La mazwe ayi-China, iRomania, iRussia, uMzantsi Afrika, iTurkey neZimbabwe. Oku kuxolelwa kungqongqo kubantu ababambe idiploma okanye incwadana yokundwendwela.
Yintoni ukusetyenziswa kweVisa yaseGuinea?
I-eVisa yabakhenkethi baseGuinea luxwebhu olubalulekileyo lokuhamba. Ivumela abemi bamanye amazwe ukuba bangene eGuinea. Wonke umntu ocwangcisa uhambo oluya kweli kufuneka afumane i-eVisa.
Yintoni esebenzayo ye-eVisa yaseGuinea?
Ngokusekwe kuhlobo lwe-visa umhambi afake isicelo kuyo, ubunyani be-eVisa yaseGuinea bunokuba ziintsuku ezingama-90 okanye iminyaka emi-3 ukuya kwemi-5.
Ngawaphi amaxwebhu endiwadingayo ukufaka isicelo se-eVisa yaseGuinea?
Oku kulandelayo ngamaxwebhu ekufuneka uwafakile xa ufaka isicelo se-eVisa yakho - ikopi yephepha langaphambili lepasipoti yomenzi-sicelo, ifoto yomntu ofaka isicelo, isatifikethi sokugonyelwa i-yellow fever kunye neenkcukacha zesicwangciso sokuhamba.
Ngawaphi amaxwebhu ekufuneka ndiwenzile xa ndifika eGuinea?
Abatyeleli kufuneka bangenise la maxwebhu alandelayo kwigunya lezokufika xa befika eGuinea-ipasipoti yabo esemthethweni, irisithi yobhaliso lwe-eVisa, ingxelo yezemali; iinkcukacha zezicwangciso zokuhamba kunye nobungqina bendawo yokuhlala.
Kuxhomekeka kulungiselelo lendawo abahambi abazenzele yona, banokubonelela ngeenkcukacha zokubhukisha zehotele yabo, iindwendwe, ihotele okanye indlu yeendwendwe.
Leliphi inani lamangeniso elivunyelweyo kwi-eVisa yase-Guine?
I-eVisa esebenzayo yaseGuinea ivumela zombini ungeniso olunye kunye noluninzi. Ke ngoko, iindwendwe zinokukhetha ukutyelela ilizwe kube kanye okanye amatyeli aliqela.
Yeyiphi imihlali ipaspoti yam ekufuneka ihlangane nayo ukuze ufake isicelo se-eVisa eGuinea?
Ipasipoti esemthethweni iyimfuneko, xa kusenziwa isicelo se-eVisa eGuinea. Kufuneka isebenze ubuncinci iinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu.
Zeziphi iindlela ezahlukeneyo zokuhlawula ezikhoyo zokuhlawula umrhumo wevisa?
Abafakizicelo banokusebenzisa iindlela zokuhlawula kwi-Intanethi ukuhlawula umrhumo wevisa. Banokusebenzisa ityala okanye ikhadi lebhanki.
Ndingalufumana njani ulwazi olunxulumene nemeko yam yevisa?
Nokuba isicelo sakho saliwe okanye samkelwe, yonke into enxulumene ne-visa iya kwaziswa kwi-imeyile yakho ye-imeyile.
Ndiza kuyifumana njani i-visa yam?
Abahambi kufuneka babonise irisithi yokubhalisa i-eVisa kwikhawuntara yokukhupha i-visa. Nje ukuba bagqibe ukubhalisa kwi-biometric, kuya kukhutshwa i-visa.